စနစ်မှာအပြစ်ရှာ System | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Community & Society » စနစ်မှာအပြစ်ရှာ System	15
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 22, 2012 in Community & Society | 15 comments
တရုတ်အကြောင်းပြောရင် သူ့နိုင်ငံ တဟုန်ထိုး စီးပွားရေးကြီးထွားပုံ မပါမပီးဘူး။ ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ် နှစ်စဉ်တိုးတက်နှုန်း ပျမ်းမျှ ၉%တောင်ရှိသဒဲ့။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်သို့ ပြောင်းလိုက်တဲ့ ၁၉၈၀နှောင်းပိုင်း ဂစဒယ်လို့ အများသိဒယ်။ ဓဂယ်ဒေါ့ ၁၉၇၈ခုနှစ် ကူမြူနစ်စနစ် အထွဋ်အထိပ် ရောက်နေဂျိန်မှာ အစပြုဂဲ့ဒါဆို ရွှီးဒယ်ထင်ဂျလေမလား။ အဲဒီအချိန်ဟာ တရုတ်တနိုင်ငံလုံး ဘုံစုပေါင်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်နေဂျိန်ဂျီး။ မြေရှင် လယ်ပိုင်ရှင် မရှိ၊ လယ်လုပ်သူ လယ်မပိုင်ဘူး၊ နိုင်ငံဒေါ်ဂပိုင်ဒယ်။ ယုတ်စွအဆုံး ကိုယ့်ခြေလက်သွား အစိတ်အပိုင်းများဂိုတောင် နိုင်ငံပိုင်လို့ သတ်မှတ်တဲ့ ဘုံစနစ်၊ မလိုက်နာရင် တန်ပြန်တော်လှန်ရေးသမားဆိုပြီး ကွက်မျက်ပစ်တယ်။သဂျီးပေါဒေါ့ လူဒွေကိုပြင်ရမဒဲ့… (ဓာတ်ပုံ နိရဉ္စရာသတင်း)
ကိုယ်လုပ်သလောက် မခံစားရမှဒေါ့ ဘယ်သူမှ အလုပ်ကြိုးကြိုးပမ်းပမ်း မလုပ်ဘူး၊ အကုန်လုံး ဖရီးချိုင်းနား ဖြစ်ကုန်ဒယ်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် အထွက်နှုန်းကျဒယ်၊ အငတ်ဘေးစိုက်တယ်၊ လူဒွေ သိန်းသန်းချီသေဒယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၇၈ခုနှစ် ဆောင်းတွင်းမှာ Xiogang ပြည်နယ် ရွာလေးတရွာရဲ့ လယ်သမားဒွေဟာ အန္တရာယ်များလှဒဲ့ လျှို့ဝှက်အကြံစည် တခုဂို အကောင်အထည် ဖော်လိုက်ကြတယ်။ ညနေပိုင်း ငါးနာရီလောက်မှာ လယ်သမား ဆယ့်ရှစ်ယောက်ဟာ အိမ်တခုမှာ စုဝေးပြီး ရွာစုပေါင်း လယ်ယာမြေကို ဝေပုံချ ခွဲဝေယူ ကိုယ်ပိုင်စိုက်ပျိုးဖို့ သဘောတူဂဲ့ဂျဒယ်။ သဘောမတူသူအချို့ဂ high voltage ကို သွားကိုင်သလိုဖြစ်မယ်လို့ သတိပေးတယ်။ ပြောမဲ့သာပြောတာ သူတို့တဦးမှ လျှပ်စစ်မီး မမြင်ဖူးဘူး။ ကြားဖူးနားဝနဲ့ ဓာတ်လိုက်သေတာဂို ဥပမာပေးဒါ။ သဘောတူဂျက်ရဒေါ့ လယ်မြေခွဲဝေမှု စာချုပ်လုပ်တယ်။ စာချုပ်အဆုံးမှာ အကယ်၍ တဦးဦး အကွပ်မျက်ခံရရင် ကျန်ဂဲ့ဒဲ့ခလေး အရွယ်ရောက်သည်အထိ ကျန်သူများဂနေ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ ဂတိခံဝန်ဂျက် ထည့်ထားဒယ်။ အဆုံးစွန်တွက် လုပ်ကြရဒါဘာ။
နောက်တော့ လယ်သမားအသီးသီး သူပြိုင်ငါပြိုင် ရုန်းလိုက်ကြတာ ရိပ်သိမ်းရာသီမှာ လယ်အထွက်နှုန်း ပြီးဂဲ့ဒဲ့ ငါးနှစ်စာ စုစုဗောင်းထက် ပိုသွားလို့ အာဏာပိုင်ဒွေဆီ သဒင်းရောက်သွားဒယ်။ ကံကောင်းဂျင်ဒေါ့ ငှက်ကထဂျီး မော်စီတုန်းသေလို့ တိန်ရှောက်ဖိန် တက်လာဒယ်။ သူ့အကြောင်းဂလည်း သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ရာဂနေ ပြန်တက်လာဒဲ့ comeback story ဖြစ်တယ်။ တိုတိုပေါရင် သူဂ ပြုပြင်ရေးသမား၊ ပါတီတွင်း ဖြုတ်ထုတ်သတ်ပွဲမှာ ဂျောင်အထိုးခံရပြီး နောက်တော့ နေရာပြန်ရဒယ်။ မော်စီတုံးလည်းသေရော သူဂေါင်းဇောင်ဖြစ်တယ်။ ပစ္စည်းမဲ့ဘုံစနစ် ဆန့်ကျင်လုပ်ခဲ့တဲ့ လယ်သမား ဆယ့်ရှစ်ဦးအတွက် ဘုရားမဒါပဲ။ အပြစ်ပေး မခံရဘူး.. သူတို့လုပ်ဆောင်ပုံဂို အတုယူပီး နိုင်ငံနဲ့တဝှန်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ပုံစံအသစ်အဖြစ် ချပေးဒယ်။ ကိုယ်စိုက်သမျှ ကိုယ်သုံးဂွင့်ပေးဒယ်။ (အပြင်ဂို ရောင်းချဂွင့် ရှိသေးဟံ မတူဘူး)။ အခြားလိုအပ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများလည်း လုပ်လိုက်တာ တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး မိုးပေါ်ထိုးတက်သွားတယ်။ အဲဒီအချိန်ဂ စလို့ သန်းငါးရာသော တရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝ ဆင်းရဲဒွင်းဂနေ လွတ်မြောက်သွားဒယ်။ အဲဒီ လယ်သမားဒွေ ချုပ်ခဲ့ဒဲ့ စာချုပ်မူရင်းဂိုတောင် ပြတိုက်မှာ သိမ်ဆည်းထားဒယ်။
အဂု ဖြစ်ရပ်ကနေ ဘာသင်ခန်းစာ ပေးသလဲ။ စနစ်တခုရဲ့ အရေးကြီးပုံ ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်းသွားပုံဖြစ်တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဘာပြုလို့ တိုးတက်လာတာ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ပြောင်းလိုက်လို့၊ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် လျော့ချလိုက်လို့ မဟုတ်ဘူးလား။ လူတဦးဂျင်း စိတ်နေသဘောထား၊ အပြုအမူများ ကျုပ်တို့ထက် အပုံဂျီးသာဒယ် ပေါမလား၊ နိုးဝေးဗာ။ စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ ပြောင်းလိုက်တော့ ရေတိုတိုးတက်မှုမှာကို သိသာဒယ်။ အဲဒီလို ပုံစံမှန်ဖို့ကို နိုင်ငံရေးစနစ်က ဆောင်ကြဉ်းပေးဒယ်။ နိုင်ငံစနစ်မှန်ဖို့ဆိုဒါ ကိုယ့်တိုင်းပြည် တခုထဲနဲ့ဒင် မပီးဘူး၊ နိုင်ငံတဂါ ရေစီးကြောင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလည်း ပါသေးဒယ်။ ဥပမာ အာဏာရှင်စနစ် တကမ္ဘာလုံးထွန်းဂါးချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ထူထောင်လို့မရဘူး။
ချမ်းသာလာရင် အမူအကျင့်တွေပါ ပြောင်းလဲသွားဒယ်။ သမားရိုးကျ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်၊ အစဉ်အလာများမှနေ သွေဖည်ကုန်ဒယ်။ စီးပွားရေးတိုးတက်တဲ့ မြို့ဂျီးပြဂျီးဒွေမှာ လက်မထပ်ဘဲ အတူနေဒါ သိပ်များဒယ်။ စီးပွားရေး အဆင်ပြေဒေါ့ အလုပ်အကိုင်ပေါဒယ်၊ လုံလောက်တဲ့ အခကြေးငွေရလို့ အရွယ်ရောက်သူဒိုင်း ကိုယ့်ခြေပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်ဒယ်။ မိဘအိမ်ခွဲနေတဲ့အကျင့် မရှိလည်း အရင်ဂလို မိဘဂနေ အရွယ်ရောက်လာဒဲ့ သားသမီးဂို ချုပ်ကိုင်လို့ မရဒေါ့ဘူး။ သိပ်တင်းကြပ်လာရင် ဟိုဂတာ့တာ လုပ်သွားမှာပေါ့။ ရုပ်ပိုင်း၊ အတွေးအခေါ်ဗိုင်း ပွင့်လင်းကုန်ဒယ်။ အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုဒါ ဘာသာဂျီးသုံးခု မွေးဖွားရာ ဂျေရုစလင်မြို့ရှိတဲ့နိုင်ငံ၊ ရန်သူပတ်လည်လဲ ဝိုင်းနေဒယ်။ စနစ်မှန်ဒေါ့ ကွန်ဆားဗေးတစ်နဲ့ လစ်ဘရယ် အတူနေဂျဒယ်။ သိပ္ပံနည်းပညာ တိုးတက်တယ်၊ လူနေမှု အဆင့်မြင့်တယ်၊ ခေတ်မှီဒယ်ပြောပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ပေါ်မှာ ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် အပြင်းဆုံးနိုင်ငံဗဲ။ အဓိကသော့ဂျက်က နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး…..။ စနစ်ကြောင့် မတူကွဲပြားဒဲ့ အသီးအပွင့်များ အလျှိုလျှို ပေါက်ဖွားလာဒါ…။
ချက်မှက်။ အန်ပီအာ ရေဒီယို ပေါ့ကတ်စ်ဟောင်းတခုအား ခံစားပီး ရေးဗာသီ။
အောင်ကြူး has written 389 post in this blog.
မောင်ပေ says: ကြေးမုံတို့က ပျောနေဘီ….
မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲတာ စောနေသေးလို့ ဒဲ့….
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဒါဂဒေါ့ ဆယာကြောင်ဂျီးရယ် စနစ်ဆိုတာကိုလုပ်တာလူ
စနစ်ဆိုတာကိုလိုက်နာတာ လူ စနစ်ဆိုတာကို မလိုက်နာတာလူ
ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံက ဟိုစနစ်လည်းကောင်းဘာဒယ် ဘာတဲ့ စရိတ်မျှပေးဘာဆိုလား ဆေးရုံမှာရေးထားတာ
ပေးပါလို့ပြောတာကို မပေးဘူး ပေးတာကိုလည်း ဝိုင်းဘတ်ကြတယ် ဆိုတော့ကာ
ကျနော် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု လို လူတွေ တော်တော်များများရှိသင့်ဘာဒယ်
surmi says: ကိုအောင်ပုပြောသလို လူကြောင့် ဆိုပါတော့ 
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: စနစ်လဲ မကောင်းဘူး.
( ကိန်မလို့ ပဲ အပေါ်က ပုတ်ဂိုက အရင်ကိန်သွားလို့)
အရင်က မွဲခဲ့တာ စနစ်ကြောင့်..ဖြစ်တယ်..
ဘေးက ဘီအီးပုလင်းအား ခံစားပီး ရေးဗာသီ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3364
အရီး Khin Latt says: မနေ့ က ယူကေ ပါလီမာန် မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသွား တယ်။
“ဒီအချိန်ဟာ မြန်မာပြည် ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အတွက် အခွင့်အကောင်းဆုံး အချိန် ဘဲတဲ့၊
ဒီတစ်ခါ မှာ မှ အဲဒီ အခွင့်အရေး ကို ကောင်းကောင်း မယူလိုက်နိုင်ရင် ဒီလို အခွင့်မျိုး ထပ်ရနိုင်ဖို့ နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ထပ်စောင့် ရပါဦးမယ်တဲ့။”
မြန်မာပြည်ကို ချစ်သူတိုင်း၊ တိုင်းပြည် ကို တိုးတက် စေလို သူတိုင်း၊ ဆင်းရဲနေတဲ့ လူထု ကို ကယ်တင်လိုသူတိုင်း သတိထားပြီး အားလုံး စည်းစည်းလုံး လုံး နဲ့ အလုပ်လုပ် ဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။
ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဖြစ် ခဲ့ပြီးတဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာမှာ လူတွေ ရဲ့ စိတ်ဓာတ် ဘယ်လောက် ပျက်ခဲ့ ကြလဲ။
ဒါကို နှစ်ပေါင်း များစွာ ထပ်ပြီး ဖြုန်းပစ် မယ် ဆိုရင် မြန်မာလူမျိုး ဆိုတာပါ ပျောက်မှာ။
လက်ရှိ အခြေအနေမှာ အခု စိုးရိမ် နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ ထက် ကိုယ့်ပြည်တွင်းက လက်တစ်ဆုတ်စာ အာဏာရှင် တွေ ကို ပိုကြောက်ရမှာ။
သူတို့ က စနစ်ကောင်း အတွက် မလိုလား နေတဲ့ လူ တွေ။
စနစ် ကို အပြစ်ရှာပါတယ်။
စနစ် ကို ပြင်ရပါမယ်။
ကောင်းတဲ့ စနစ် ကို ရအောင် လုပ်ကြရပါမယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ စနစ် ဆိုတာ မကောင်းလို့ ပြင်ဖို့ ကြိုးစား နေတဲ့ “လူ” တွေ ကို နှောက်ယှက် နေတာ “ပျက် နေတဲ့ စနစ်” က မဟုတ်ဘူး။
စနစ်ကောင်း ရမှာ ကို မလိုချင်တဲ့ “လူ” တွေ။ ဒီတော့ ဘာကို အရင်ပြင် ရမှာလဲ။ တောက်(စ်) (မူရင်း- ဂဂ)
Azzurri says: ဟိုဘက်မှာအကြွေဇိနဲ့ပစ်နေတယ်တဲ့
mocho says: လူကောင်းမှ စနစ် ကောင်းနိုင် မည်ဖြစ်၏။ လူမကောင်းသရွေ့ အလကားပဲ။ ဘာတဲ့စာတောင်ရှိသေး။
လူကိုခင်လျှင်မူကိုပြင်သည်၊ လူကိုမုန်းတော့ မူကိုသုံးသတဲ့။ ကျမတို့ရုံးမှာ တုန်းက သုံး တဲ့ စကားပါ။
MaMa says: ဘုံလယ်ယာမြေစနစ်ကနေ လယ်ယာမြေခွဲဝေမှု စတင်လုပ်ကိုင်ဖို့ စိတ်ကူးရဖို့ ခက်တယ်။
ရတဲ့ စိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့က ပိုခက်တယ်။
တဦးဦး အကွပ်မျက်ခံရရင် ကျန်ဂဲ့ဒဲ့ခလေး အရွယ်ရောက်သည်အထိ ကျန်သူများဂနေ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပါမယ် ဆိုတဲ့ Plan B ကိုပါ တပါတည်း ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့ စီမံကိန်းကို စောင့်ရှောက်ထားတယ်။
အခုလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာထိ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ခံစားရတာကြောင့်
စွန့်ဦးတီထွင်သူ လယ်သမား ၁၈ ယောက်ကို ကောင်းကောင်း ဂုဏ်ပြုသင့်တယ်။
သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2697
pooch says: ဂျေရုစလင်မြို့ မှာ စနစ်မှန်လို့ လက်ဝဲ လက်ယာ အတူတူနေကြတယ် ဆိုတာ လည်း ဟုတ်တာပဲ ။ ရှိတဲ့ စနစ်ကောင်းကို လိုက်နာနိုင် လိုက်နာတတ်တွေ လူတွေကြောင့်ဆိုရင်လည်း ပြောလို့ရတာပဲ။
အရီးပြောတဲ့ စနစ်ကောင်းကို မလိုချင်ပဲ နောက်ပြန်ချင်တဲ့ လူတွေကြတော့ရော ဘယ်နှယ့်လုပ်ရပါ့ :?
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 849
ရဲစည် says: စနစ်ဆိုလို့ပါ….. ကျုပ်နဲနဲဝင်ပါကြည့်မယ်…..ဆိုတာထက် ၀င်မေးကြည့်တာပါ……….။
လူတွေကို ကြည့်ပီး ရေးတာလား
စနစ်ဆိုတာ စစအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အနစ်နာခံရတယ် ဒါကြောင့် စ+နစ်=စနစ်လို့ခေါ်တယ် အဲဒါကျုပ်သီအိုရီ
ဥပမာ ချီးပါပီးရင် ဖင်ကို(ရေ၊စက္ကူ၊ဒုတ်)နဲ့ သန့်စင်ရတာ
တခါတလေမှာ စနစ်နဲ့လူ တိုက်ရိုက် အချိုးကျပေမဲ့
အထက်က ဂျော်နီကြောင်ကြီးပို့စ်နဲ့ မိုက်ကယ်အောင်ပု ကွန်းမင့်ဖတ်ရတာ မြင်သာထင်သာရှိတယ် လေးဇားဒယ်ဗြာ အတည်….
ဟိုတလောက ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ကားကိစ္စတော်တော်ဟော့တယ် ပိုက်ဆံမရှိဘူး အလုပ်မကောင်းဘူး အရောင်းအ၀ယ်မကောင်းဘူးကြီး ညဉ်းနေသူတွေ ဒီကိစ္စပေါ်လာတော့ သောက်ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်ဂျားထဲက ထွက်လာသတုန်း။လက်ရှိအစိုးရရာ ကုန်ခဲ့တဲ့အစိုးရပါ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်က လူဒွေသောက်ကျင့်ကို တဖက်ကမ်းခပ်ကျွမ်းတယ် ….ဆိုတော့ဂါ
အစိုးရက လူတွေရဲ့ အခြေအနေကို သိနေရင်တောင်မှ စနစ်ဆိုဒါဂျီးကို ဖောဖောသီသီ မကွန့်ကြဘူး…စည်းဆိုတာထက် လူတွေကို ကြောက်တာပိုများတယ်(ဒါကျုပ်ရဲ့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင် အတွေးအခေါ်)
လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်တွေက အူရောပမှာ ကျုပ်တို့လို သူတောင်းစားတွေနဲ့ ကျုပ်ရဲ့တတိယမြောက်ရည်းစားလို ပြည့်တန်ဆာဒွေကို မြို့ထဲမှာ အတည်တကျနေရာပေးပီး အသိအမှတ်ပြုထားပေးတယ် အဲဒါစနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး လူဒွေကြောင့်……………….. အထက်က ကိုကြောင်ကြီးပို့စ်မှာ ဆန့်ကျရင် သတ်ခံရမှာ သိတာတောင် လယ်သမားတွေ အနစ်နာခံပီး စနစ်ကို ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်
ကျုပ်မနှစ်က သင်ခဲ့ရတဲ့ ဖတ်စာမှာ ဦးနာအောက် အကြောင်းပါတယ် စနစ်ကို အနစ်နာခံပီး ဖေါ်ဆောင်ပေမဲ့ သောက်သုံးမကျတဲ့
လူတွေက မလိုက်လာတော့ အစိုးရက နိူင်သွားတယ် ဒါကျုပ်အတွေး….
ဒီတော့ ကျုပ်တိုနိူင်ငံသားတွေ သောက်တင်းတုပ် အစိုးရကို မကောင်းကြောင်းပြော လွှဲချကြ ပြီးရင် ဟိုလူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာကို
ဖြစ်ချင်တာတွေ ဇွတ်လုပ်ခိုင်း ကိုယ်တိုင်က အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော အခြေအနေဟန်မှ လက်ထောင်တဲ့ သောက်ကျင့်တွေ
မြန်မြန်ပြင်မှရမယ် နိူ့မဟုတ်ရင် ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး ဒါဗြဲ….
ကျုပ်လဲ စာဖတ်သလိုလိုနဲ့ ၀တ္ထုခိုးဖတ်လိုက်အုံးမယ် သြော်စနစ်…စနစ် အဲယောင်လို့ လူဒွေ….လူဒွေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8424
kai says: မြန်မာတွေရဲ့.. ရှေးစွန်းစွဲ ကွန်ဆာဗေးတစ်အစွန်းရောက်တွေကတော့.. ၉၅ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်..
သူတို့က.. လစ်ဘရယ်နဲ့ဘက်မညှိပဲ.. အစွန်းနင်း… ဆွဲဆွဲချနေတော့ကာ.. တိုင်းပြည်ဟာ.. ဘာနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့..လုပ်လုပ်.. တိုးတက်လာမယ်မထင်မိပါဘူး..
နှစ် ၁၀၀၀ ကျိန်စာပါ…။ http://mandalaygazette.com/131262/uncategorized-other/copypaste
မှာမန့်ထားတာကို ..ဒီဖက်ဖြတ်ကူးလာတာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1822
surmi says: နှစ် ၁၀၀၀ ကချင်မှကမယ်
maung khinmin says: စနစ်ပြောင်းဖို့ …အမြစ်ဟောင်းကိုလှန်ကြစို့ 
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2557
အလင်းဆက် says: အမှီလိုက်…နေရပါကြောင်း…
aye.kk says: ခြစားနေတဲ့သူတွေကို…
လှည်းဘီးကရှေ့ ကိုသွားရမှာ၊နောက်ပြန်ယက်နေတယ်ဗျို့ …။။
Comments By Postလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - မွေ့ကေသာ - မွေ့ကေသာအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - ပန်း စံပါယ် - ပန်း စံပါယ်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Munetezအဟံ ပထမံ - kai - weiweiမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ko pauk mandalay - ko pauk mandalay``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - ခင် ခ - kaiမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ဦး ကျောက်ခဲ - ko pauk mandalayသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - အရီးခင်လတ် - KZရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - ဦး ကျောက်ခဲ - padonmarကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - ဦးဦးပါလေရာ - Munetezကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - Lay Pai - ခင် ခတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - KZ - ရွှေတိုက်စိုးPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် -etone - ကြောင်ဝတုတ်အထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - KZ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအိပ်မက်မင်းသမီး - KZ - မောင် ပေဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - အရီးခင်လတ် - ရွှေတိုက်စိုးနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ဦးဦးပါလေရာရထား ထွက်တော့ မယ် - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Miss Crystallineမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - kai - ခင် ခသမ္မတကြီး ဦးကြောင် အိမ်သာview - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ရွှေတိုက်စိုးလူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ei - ဆူးသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - ကြောင်ဝတုတ် - အလင်း ဆက်East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77889 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67257 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66748 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58994 Kyats )MaMa (57851 Kyats )Top Posts & Pagesဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews